ကွှကျတှေ တကယျပွေးလို့ ပွနျလညျမြှဝခွေငျးဖွဈပါတယျ ‘ကွှကျတှပေေါနရေငျ ကွှကျပွေးသော ဒါဏျကွလေိမျးဆေး’ - Maythadin
May Thadin | January 14, 2021 | Knowledge | No Comments
ကွှကျတှကေ ပေါလိုကျတာပေါတာမှ စာအုပျတှကေိုကျ အဝတျတှကေိုကျ
ညကတြော့ တဈဝုနျးဝုနျးနှငျ့လိုကျတမျးပွေးတမျးကစားကွတဈခါတလမြေားဆို ပွေးရငျးလှားရငျးခွငျထောငျအမိုးပျေါဒိုငျဘငျထိုးခလြှနျတာမှအတျောလှနျ့အဲ့ဒါနှငျ့ကလေးတှကေ ထောငျခြောကျထောငျမယျလြှောကျတယျ့မလုပျနှငျ့ ဆေးကြှေးမယျဆိုတယျ့လုံးဝမလုပျနှငျ့ပေါ့….
အဲ့ဒါနှငျ့တဈနကေ့တြော လကျမောငျးအောငျ့လို့လငျဇီးဒါဏျကွဆေေးလိမျးတယျ့ ပူလိုကျတာ့..အခိုးကလညျး မှနျပွီးမကျြရညျကတြယျ့လူတောငျအနံ့ခိုးရတာနှငျ့မကျြရညျကရြတယျ ဟိုအကောငျတှေ(ကွှကျ)ဆိုဘယျလိုနမေလဲမသိ့သူတို့နှာခေါငျးကရှရေ့ောကျနတောဆိုတော့ ပိုပွီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပွီးစမျးကွညျ့မယျပေါ့
ဆိုတော့ကြောငျးသားသုံးယောကျချေါ ကွှကျလာလမျး လြှောကျလမျးတှေ လငျဇီးတှေ ထူထူသုတျပွီးအသာနလေိုကျတာ့ည(၁၀)နာရီလောကျကတြော့ သောငျးကနျြးဖို့လာနကွေအခြိနျအတိုငျး ကွှကျတဈအုပျရောကျလာပါရော့ရှဆေုံ့းကအကောငျက သုတျထားတဲ့လငျးဇီးနှငျ့နဖူးတှဒေူ့းတှတှေ့ပွေီ့းကွမျးပွငျပျေါပွုတျကြ့…
သူ့ပါးစပျကအျောခငျြတာအျောပွီး ထှကျပွေးအဲ့ဒီလိုနှငျ့နှဈကောငျသုံးကောငျလောကျဖွဈရော..နောကျကကွှကျတဈအုပျရှဆေ့ကျမတကျပဲ အသိုကျပါပွောငျးတယျထငျပါရဲ့…ခုဆိုကွှကျတှလောမသောငျးကနျြးတာသုံးရကျရှိပွီ…..ကြေးဇူးပါလငျဇီးရေ သူ့အသကျမသပေဲ စိတျခမျြးသာစှာအိပျစကျနိုငျတာ့တယျ
ှကွက်တွေက ပေါလိုက်တာပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက်
ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြတစ်ခါတလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချလွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ်လျှောက်တယ့်မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့….
အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့..အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့်လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိ့သူတို့နှာခေါင်းကရှေ့ရောက်နေတာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့
ဆိုတော့ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီးအသာနေလိုက်တာ့ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြအချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော့ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ့…
သူ့ပါးစပ်ကအော်ချင်တာအော်ပြီး ထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုနှင့်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဖြစ်ရော..နောက်ကကြွက်တစ်အုပ်ရှေ့ဆက်မတက်ပဲ အသိုက်ပါပြောင်းတယ်ထင်ပါရဲ့…ခုဆိုကြွက်တွေလာမသောင်းကျန်းတာသုံးရက်ရှိပြီ…..ကျေးဇူးပါလင်ဇီးရေ သူ့အသက်မသေပဲ စိတ်ချမ်းသာစွာအိပ်စက်နိုင်တာ့တယျ
ရေတွင်းထဲသို့ ပြုတ်ကျပေမယ့်​လည်း အသက်မသေခဲ့​သော အဖွား
ဧရာမ ရွှေရောင်ရုပ်တုကြီး စိုက်ထူပြီး သိုးကျောင်းခွေးလေးတွေကို ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်
မြန်မာနိုင်​ငံမှထန်းလျှော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးရက်လုပ်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဟာ မကြာခင်​ပြီးစီး​တော့မည်​ဟုသိရ
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်​လာလို့ မိဘတွေသူငယ်ပြန်ကြတဲ့အခါမှာ သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ​နော်